दुई दिन हिडेर निःशुल्क स्वाश्थ्य शिबिर गर्न डोल्पा पुगेका डा. गोबिन्द केसीलाई गाउपालिका अध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिको अवरोध, वातावरण असहज देखेपछि डा. केसी फर्किए – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७७ श्रावण २१, बुधबार) १९:४९
निःशुल्क स्वाश्थ्य शिबिर संचालन गर्न दुई दिन पैदल हिँडेर डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–६, रिमी पुगेका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीलाई गाउपालिका अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधि र केही स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेपछि डा. केसी त्यसै फर्किएका छन्।
प्राप्त समाचार अनुसार, जगदुल्ला गाउँपालिका–६ मा रहेको रिम स्वास्थ्यचौकीमा साउन १३ गते नि:शुल्क स्वास्थ्य शिबिर आयोजना गरेका डा. केसीले स्वास्थ्य शिबिरका लागि सहयोग र समन्वय गर्न रिम स्वास्थ्यचौकीका कर्मचारीलाई अनुरोध गरेका थिए।
गाउँपालिकासँग समन्वय नगरेको विषयलाई मुद्दा बनाइयो । गाउँपालिकासित समन्वय नगरेको तथा गाउँपालिकालाई जानकारी नगराइएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष नारासिंह रोकायको निर्देशनमा स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले सर्वसाधारणलाई खबर गरिदिएनन् । राजधानीबाट डाक्टर आएको खबर पाएका केही स्थानीय बासिन्दाले नि:शुल्क स्वास्थ्य शिबिर आयोजना गरिएको दिन उपचार गरे। तर, गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिले अवरोध गर्दा उनी निराश भएर फर्केका छन् ।
दुई दिन पैदल हिडेर १३ गते बेलुका रिमी पुगेका डा. केसीले १४ गते केही बिरामी जाँच गरे । वातावरण सहज नभएपछि उनी १५ गते बिहानै जुम्ला फर्किए ।
दुई दशकसम्म देशका विभिन्न कुनाकाप्चामा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिनेक्रममा आफूले पहिलोपटक नमिठो अनुभूति गर्नुपरेको डा.केसीको भनाइ छ । आफ्नै कारण स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले धम्की सहनु परेको केसीले बताए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा यस्तो व्यवहारको अपेक्षा आफूले नगरेको उनले बताए ।
रिमी स्वास्थ्यचौकी पुगेपछि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नबाट रोक्ने गरी गाउँपालिका अध्यक्षले उक्त स्वास्थ्यचौकीका स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्की दिएको डा. केसीको आरोप छ । ‘म कुनै राजनीतिक कार्यक्रम गर्न गएको होइन, न त सरकारको विरोध गर्न गएको हुँ,’ उनले भनेका छन्, ‘मेरो उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु थियो, तर समन्वय नगरिएको विषयलाई ठूलो इस्यू बनाइनु पीडादायी क्षण भएको छ ।’
स्वास्थ्यचौकी रिमीका इन्चार्ज ऐनबहादुर बोहोराले डा .केसीले गाउँपालिकामा कुनै जानकारी नगराएकाले भनेअनुसार सर्वसाधारण बोलाउन नसकिएको बताए । उक्त समयमा आफू फिल्डमा रहेको भन्दै बोहोराले शिविरका लागि आवश्यक तयारीसमेत हुन नपाएको बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायले सबैले स्थानीय सरकारको नियम, प्रक्रिया र पद्धति मान्नुपर्ने बताए । उनले गाउँपालिकासित कुनै समन्वय नगरेको, जानकारी नगराएको जिल्ला अस्पतालबाट पनि अनुमति लिएको तथा अरु कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि प्रक्रियाअनुसार आउन भनिएको बताए । कुनै पनि काम गर्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै उनले यस विषयमा अरु कुनै कुरा नभएको बताए । समाचार श्रोत कान्तिपुर
(२०७७ श्रावण २१, बुधबार) १९:४९ मा प्रकाशित